Qeybtii 4-aad Sheekooyinka lagu soo halqabsado ee murti ahaanta loo isticmaalo
GABADHII BIYUHU LIQEEN.
Beri baa gabadh waxay damacday inay keli u dhawaa ku soo dabaalato, intay biyihii sii dhex galeysay ayey lugta u fakatay oo moolkii ku dhacday, qaylo ayey afka furatay, iyadoo bihiina ku hafaneysa, qaylideedii ayaa waxaa ku soo leexday oday jidka u dhaw keligaa maraayey, oday oo aad u careysan ayaa gabdhii oo biyaha ka dhex hiqleyneysa waano iyo canaan iyo dhaliil la kor fadhiistay intii uu ka bixin lahaa,iaydii oo ay nafta ku dabo yar tahay ayey tiri war horta biyaha iga saar oo I badbaadi, ka dibna waxaad doonto I dheh''''
. LABO SAAXIIB
Beri baa labo wiil waxay ahaayeen saaxiibo, mid ka mid ah labada wiil wuxuu ahaa mid aad u faan badan, wuxuuna oran jiray aniga beri dhaweyd oo aan miyiga tagay libaax baan dilay, shabeel baan garaacay, waraabaa fara ciddi leh iiga fakaday, dawacada iyo yeyduna iima soo dhawaan karaan. Markasta sidaa ayuu saaxiibkii ugu booloxoofteyn jiray. Hase yeeshee wiilka kale wuu ogaa in waxaas oo dhami beenti yihiin oo uusan libaaxna dili karin maroodina u dhawaan karin. Balse wuu iska dhagaysan jiray. Berigii dambe ayaa markii iskuulka loo xiray ayey labadoodii fasax miyiga u aadeen, maalin maalmaha ka mid ah iyagoo meel duur ah socda ayaa waxaa ku soo baxay waraabe gaajaysan, si kedis ah ayuuna uga horyimid. Wiilkii faanka badnaa ee oran jiray waxbaan dilay, markiiba cagaha ayuu wax ka dayey, kii kalena isna wuu ka daba orday. Hase yeeshee labadoodiiba waxaa ceyrsaday waraabihii, markay ka fakan waayeen ayaa waxay goosteen inay geed ka fuulaan, midkii faanka badnaa markiiba geedkii ayuu dhalada u gadhacay, kii kalena isagoo dhexda sii maraya ayuu soo dhacay, markiibana waraabihii baa ku yimid. Markuu wuxuu sameeyo garan waayey ayuu meyd iska dhigay. waraabihii markuu u yimid wiii oo geedka hoos jiifa ayuu dhegeha iyo madaxa ka ur-ursaday. Hase yeeshee wiilkii isma uusan dhaqaajin, xitaa neefta ayuu isku celiyey. Markuu xubin dhaqaaqda ka waayey ayuu isag tagay. Midkii faanka badnaa ee geedka saarnaana meeshiisa ayuu ka daawanayey.
Markuu waraabihii tagay ee uu soo dagay ayuu wuxuu ku yiri "Waryaa hebelow waraabuhu muxuu dhegta kuugu sheegayey"? wuxuu ku yiri "wuxuu I yiri weligaa nin faan badan faankiisa ha rumaysanin, hana la saaxiibin".
Qeytbtii 3-aad halkaan ka Aqriso